Home » Akụkọ ndị ọbịa nke mba ụwa » Akụkọ Njem India » Ndi India tufuru ndi ndu njem njem 2 nye COVID-19
LR - Anil Bhandari na Rajendra Kumar, ndị isi njem nke India
COVID-19 a na-atụ ụjọ coronavirus na-aga n'ihu na-ebibi ndụ ndị dị na India yana n'etiti ndị ọ kụrụ bụ ndị ọrụ ụlọ ọrụ njem na ndị isi.
Anil Bhandari na Rajendera Kumar nke ngalaba njem na njem njem nke India furu efu taa gafee COVID-19.
Bhandari na Kumar nwere nnukwu ọzụzụ ịzụlite ọbịa.
Coronavirus nke India karịrị mmadụ 21 dịka ndebanye aha abụọ nke 412,262 COVID-19 ka edebara aha na mba ahụ.
Ndị ọhụrụ tara ahụhụ nwụrụ taa maka ọrịa a bụ ndị egwuregwu abụọ dị mkpa na njem njem.
Anil Bhandari, onye isi AB Smart Concepts, meriri ọgụ ya na COVID-19, na-anwụ n'ụtụtụ a ka ọ gachara ụlọ ọgwụ obere oge. Bhandari bu onye isi nke India Tourism Development Corporation n’oge o n’ebido, ya emechaa ya na Travel House.
Bhandari rụrụ ọtụtụ ọrụ iji weta obodo siri nri ma hụkwa na enyere ndị rụzuru na kichin ụwa oke ruru ha.
Onye ọbịa ndị ọbịa nke ọzọ nwụrụ taa bụ Rajendera Kumar, onye isi ụlọ ọrụ ndị nnọchi anya gọọmentị na New Delhi. Ọ bụ nwa nwoke a kọrọ akụkọ ya na Ram Pershad, onye chịrị gọọmenti na-ahụ maka họtel ruo ọtụtụ afọ.